Home Wararka Janaral Morgan oo si rasmi ah ugu biiray Musharaxiinta MW Puntland
Janaral Morgan oo si rasmi ah ugu biiray Musharaxiinta MW Puntland
Musharax Madaxwayne Janaraal Maxamed Siciid Moorgan ayaa maanta si rasmi ah ugu biiray doorashada Madaxweynanimada ee Puntland. Musharax ayaa si wayn loogu soo dhoweeyey magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland.
Janaraal Morgan ayaa waxaa loo haystaa in uu ka danbeeyay xasuuqii ka dhacay Soomaliland oo dad badan lugu dilay. Dad badan ayaa aad uga xumaaday sida loo soo dhaweeyay Janaal Morgan oo loo arko in uu yahay dagaal ooge. Halka Dadka reer Puntland u arkaan in uu yahay geesi badbaadiyay Shacabka ku dhaqan Puntland xiligii dagaalka Sokeeye.